Waa maxay Farsamaynta Mashiinka Raadinta? | Martech Zone
Talaado, Agoosto 14, 2012 Axad, Sebtembar 8, 2013 Douglas Karr
Waxaan ku jirnay laad aad u weyn dhawaanahan oo aan kaaga digeyno farsamooyinka habeynta mashiinka raadinta kuwaas oo dhibaato kugu ridi doona. Xitaa haddii bartaadu aysan maanta dhibbanayn, Google wuxuu sii wadaa inuu wax ka beddelo algorithms-ka oo uu tijaabiyo kuwa cusub ee berri ku qaban doona. Ha isku dayin inaad ku dirto makiinadaha raadinta… way kula qabsan doontaa.
Tani Raadi Infographic by SEO Book kugu dhex socdo farsamooyinka kala duwan ee ay tahay inaad iska ilaaliso si aadan u soo saarin waxyaabo loo qaadan doono inay yihiin spam mashiinka raadinta.
Tags: infographicayna search engineraadinta injineernimada raadinta infographicspam mashiinka raadintaraadi infographicraadinta spamseo infographicbuugga seobook
SocialTV = Muuqaal + Bulsho + Interactive
Aug 15, 2012 at 11: 44 AM
Intro-kaaga, waxaad dhahdaa in infographic-ka “uu kugu dhex socdo farsamooyinka kala duwan ee ay tahay inaad iska ilaaliso sidaas
ma soosaaraysid waxyaabo loo qaadan doono inay yihiin spam mashiinka raadinta. ”
Laakiin fiirinta garaafka ah waxay umuuqataa inay muujineyso ujeedo kale: garaafku wuxuu umuuqdaa mid loogu talagalay in lagu jeesjeeso ama lagu dhaleeceeyo dhamaan fikirka Search Engine Spam - ama ugu yaraan lagu jeesjeeso qeexitaanka Google ee ku saabsan
Waxay tilmaamayaan, khaanadda midigta, in Google ku dhaqmo ku dhowaad dhammaan farsamooyinka ay u aragto inay "xun" yihiin, waxayna soo jeedinayaan inay dhab ahaan farsamooyinkan u oggolaadeen Google inuu noqdo mid aad u guuleysta. Gaar ahaan salka garaafka (“Ah… marka spam waa…”) waxay u egtahay inay ka dhigeyso madadaalo fikradda ah “spam-ka wax lagu raadiyo” iyo / ama soo jeedinta in spam-ka mashiinka wax lagu baaro uu yahay farsamo suuq-geyn rajo leh oo wax ku ool ah.
Waa maxay fikradahaaga arrintan? Miyaad ku aragtaa farriin isku mid ah infographic that I do?
Hadday sidaas tahay…. ma ku raacsan tahay fariintaas?
Agoosto 15, 2012 saacaddu markay ahayd 12:39 PM
Xaqiiqdii waan arkaa isla waxa aad sameyso, Greg. Wax yar ayaan ka shakisanahay qaabka Google ee ku wajahan arimahan sidoo kale - laakiin iyagaa madax ah waana inaan raacno shuruudahooda… xitaa hadii ay jeebkooda ku jiraan